Mbido DCMA Mara
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) mara.
Na LifeBogger, anyị na-akwanyere ikike ndị nwebisiinka ùgwù na anyị ga-arụ ọrụ na ha iji hụ na ewepụrụ ihe (s) na-emebi ọrụ na ọrụ anyị. LifeBogger nwere Akụkọ nwata gbakwunyere na-enweghị akụkọ ndụ eziokwu gbasara ndị egwuregwu bọọlụ.
Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla, biko ziga ozi-e nwere nkọwa niile dabara adaba na nlebara anya nke "Mbibi Nwebiisinka" site na anyị. ụdị anyị kọntaktị page. Anyị ga-eme mmezi ozugbo.
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Rịba ama chọrọ nkwupụta ịda iwu ọ bụla dị na ederede yana ọ gụnyere ozi ndị na-esonụ:
Mbinye aka ahụ ma ọ bụ kọmputa nke nwe nwebisiinka ma ọ bụ onye enyere ikike ịrụ ọrụ na nnọchite anya ya.
Ezigbo nkọwa nke ọrụ nwebisiinka kwuru na LifeBogger mebiri.
Nkọwa nke ihe na-emebi iwu na ozi. Nke a kwesiri ikari ikari ikari LifeBogger ka ichota ihe omumu a.
Ozi ịkpọtụrụ gị ka LifeBogger nwee ike ịkpọtụrụ gị ngwa ngwa.
Nkwupụta sitere na gị na ị nwere ezigbo okwukwe kwenyere na iji ihe ahụ akwadoghị ikike nwebiisinka ya
Nkwupụta na ozi dị na ọkwa ahụ ziri ezi. Ọzọkwa, n'okpuru ntaramahụhụ nke ịgha ụgha, na ozi ị na-enye anyị ziri ezi yana ị nwe nwebisiinka ma ọ bụ ikike iji aka gị rụọ ọrụ na nnọchite nwe nwebiisinka.
LifeBogger ga-eme ya kacha mma na-aza “arịrịọ niile were were”Nke na-esonyere chọrọ nke Digital Millennium Copyright Act (DMCA), yana iwu amamihe ndị ọzọ metụtara.
Akụkọ nwata Nayef Aguerd gbakwunyere Eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị ekwu okwu
Akụkọ nwata Fabio Vieira gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Hwang Ui-jo gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị ekwu okwu
Nwere ike 22, 2022
NKWUKWU!! LifeBogger anaghị ekwu na ọ bụ ya nwe foto ọ bụla ebisara na webụsaịtị ya. Ọzọ, anyị anaghị anabata foto ma ọ bụ vidiyo n'onwe anyị. Ndị ode akwụkwọ anyị na-ejikọ naanị ndị nwe ya. N'ikpeazụ, LifeBogger ejiriwo nlezianya tụlee ma nyochaa ọdịnaya ya niile. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-ekwe omume na ụfọdụ ozi nwere ike bụrụ ihe ochie ma ọ bụ ezughị ezu.
B LifeBogger Copyright © 2022.